Ogo - Teknụzụ nzacha
Tụgharịa ogo nzacha anyị n'ime ịdị mma mmiri gị
Ịchụso Ịdị mma na Ogo
Ogo dị elu sitere na teknụzụ zuru oke, sistemụ njikwa zuru oke yana nlekọta siri ike. Anyị na-achụso ịdị mma n'oge usoro niile maka akụrụngwa na-abata na ihe nrụpụta ma ọ bụ ngwaahịa emechara. Enyerela ngwaahịa anyị asambodo ndị a: NSF, WQA, IAPMO, WRAS, ACS, MOH, CCC, CQC, CE, EMC, ROHS, GS, PCT, IMQ, UL, FCC, CB, NOM, SIRIM. JBE (ST), TISI, nchekwa, wdg.
Ndị R&D nke Filter Tech na -agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ na -ahụ maka mmiri. Anyị na-ewere njikwa oru ngo dị ka isi isi, ma na-eji Ngwa ise na echiche injinịa nke APQP, FEMA, MSA, PPAP na SPC iji mejupụta njikwa usoro ndị ahịa ka ngwaahịa wee nwee ike mezuo ihe ahịa chọrọ ngwa ngwa yana nke ọma. ntụkwasị obi ịdị mma.
Ụlọ nyocha ụlọ iji meziwanye nlekọta nlekọta
E guzobere ụlọ nyocha nnwale mmiri dị ka NSF, WQA na ụkpụrụ asambodo ikike ndị ọzọ. Ike njikwa na nnwale anyị kwekọrọ n'ụkpụrụ ndị mba ụwa kwadoro maka ngwaahịa ndị metụtara mmiri. Ụlọ nyocha ahụ nwere ngwa nnwale NSF asatọ, nke nwere ike ime nyocha zuru oke na nchekwa akụrụngwa, nchekwa nchekwa, nchekwa ọrụ, nchekwa eletriki, nchekwa njem na arụmọrụ nzacha, gụnyere ihe karịrị narị ule ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ike nhazi. , mgbochi ịka nká, ụda, microbiology, ndakọrịta electromagnetic, wdg.
Na Septemba 2018, ụlọ ọrụ nzere mba China maka ntule nkwekọrịta (CNAS) kwadoro ụlọ nyocha ụlọ anyị.
Njikwa njikwa siri ike
Uru ndị ahịa na -eme mgbalị a bara uru. Ọ na-ebelata ihe egwu dị na ya site n'ikwe ka anyị dozie nsogbu ndị nwere ike tupu oge eruo, yabụ, site n'inye mmesi obi ike dị mma, ọ na-enyere aka belata mkpesa ngwaahịa ma chekwaa mmefu ire ere mgbe emechara gị.
Asambodo ihe egwu
Mmemme chọrọ asambodo nwekwara ike rite uru na ụlọ nyocha anyị, ebe anyị nwere ike ịme ule n'ime ụlọ tupu nnwale site n'aka ndị asambodo ikike. Nke a pụtara nke ukwuu nye gị site na izere iweghachi nzere ule gị ka enwere ike iji mee ka asambodo ngwa ngwa.
Nyere aka na ngwa
Ndepụta ngwaahịa na asambodo pụtara ọtụtụ ihe maka nzacha mmiri. Ihe nzacha nke tozuru oke na-enwe ike belata ikpughe na mmetọ metụtara ahụike. Anyị ruru eru ma na -adị njikere mgbe niile inyere gị aka ịnye ngwaahịa maka nyocha ndị ọzọ mgbe ịchọrọ ya.
Isonye n'usoro nhazi ụkpụrụ
Na -ekere òkè na iguzobe iwu obodo maka ịdị mma mmiri, anyị na -esetịpụ ụkpụrụ n'ime ime nke na -agabigaghị n'iwu mba. N'ọgbọ ọ bụla nke mmepe tupu ịmalite ngwaahịa, anyị na -etinye nnukwu nlebara anya na ntule maka ịdị mma na nchekwa. Anyị ga -aga n'ihu na -edobe ịdị mma nke ngwaahịa na -agbanwe agbanwe, nwee ntụkwasị obi, yana nchekwa maka ndị na -azụ ahịa.
Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Sistemụ osmosis kacha mma, Njikere nzacha, Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri, Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ,